ईपीएल उपाधिका दाबेदार - खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
ईपीएल उपाधिका दाबेदार
- द मिरर, लन्डन
श्रावण २८, २०७४-एन्टोनियो कोन्टेको चेल्सी गत सिजन बेग्लै टिम थियो । टोटेनहम, म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलले निकै कठिन मिहिनेत गरे चेल्सीलाई उछिन्न । तर सकेनन् । अब यो सबै इतिहास भएको छ । नयाँ सिजन शुक्रबार सुरु भएको छ । यो नै वर्तमान हो । इङलिस फुटबलका धनी र बलिया क्लब नयाँ सिजनको सुरुआतसँग उपाधि होडमा हुनेछन् । अन्त्यमा उपाधि जित्ने त एउटै टिम न हो । को होला त यो टिम ? सन् २०१७/१८ को इङलिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) को उपाधिका ६ प्रमुख दाबेदार :
यदि चेल्सीले यसपल्ट पनि लिग जितेर उपाधि रक्षा गर्ने हो भने तय छ, टिमले धेरै थोक बढी गर्नुपर्नेछ । गत सिजन चेल्सीको प्रभाव नै बेग्लै थियो । तर कम्युनिटी सिल्डमै देखियो, चेल्सी आर्सनलअगाडि लाचारजस्तै थियो । त्यसैले एन्टोनियो कोन्टेले ढिलो–चाँडो नयाँ खेलाडीमा लगानीका लागि माग गर्नेछन् । अल्भारो मोराटा ७ करोड पाउन्डमा क्लबमा आएका छन् । तर उनी एक्लैले केही हुने छैन । गत सिजनयता स्टामफोर्ड ब्रिजमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यो अहिले त्यहाँ पक्कै खुसीको माहौल छैन । जोन टेरी अन्यत्र लागिसके भने डिएगो कोस्टा टिममा छैनन् । चेल्सीले उपाधिका लागि मिहिनेत गर्नेछ, त्यसमा शंका छैन । तर कोन्टेको टिमलाई सजिलो पनि हुने छैन ।
ह्यारी केन । गत सिजन उनी खुबै राम्रोमा लयमा थिए । यी इङलिस अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अहिले लगातार तेस्रो सिजन सर्वाधिक गोल गर्दै गोल्डेन बुट अवार्ड जित्ने अभियानमा छन् । टोटेनहमको टिममा पनि राम्रै समिश्रण पाइन्छ । यसपल्टको लिगमा मिडफिल्ड र डिफेन्समा कुनै एक टिममा सबैभन्दा राम्रो सन्तुलन छ भने त्यो टोटेनहमसँग छ । प्रशिक्षक मोउरिसियो पोचेटिनोको नेतृत्वमा ढिलो–चाँडो क्लबले लिग जित्नेछ, यस्तो विश्वास गर्ने धेरै छन् । केन चोटको समस्याबाट गुज्रिरहने हुँदा टोटेनहमले यसमा खास ध्यान दिनुपर्नेछ । स्पर्ससँग बजारबाट नयाँ खेलाडी ल्याउने समय र सामथ्र्य दुवै छ ।
पेप ग्वार्डिओलाले कुनै न कुनै क्षण ईपीएल जित्नु सजिलो मानेको भए, त्यो गम्भीर भूल थियो । गत सिजन उनको आगमनसँगै सिटीमा त्यो उत्साह देखिएन, जुन अपेक्षित थियो । ग्वार्डिओलाले बिछयाएको रणनीतिक जालमा टिमका धेरै सिनियर खेलाडी पनि अन्यौलमा देखिए । यस सिजनका लागि क्लबले केही नयाँ अनुहार किनेका छन्, त्यसैले सिटी फेरि एकपल्ट उपाधिको बलियो दाबेदार हो, यसमा शंका छैन । यसपल्ट सिटीकै टिम सबैभन्दा बलियो छ भनेर दाबी गरे पनि हुन्छ, कम्तीमा कागजमा । के सिटीले यसपल्ट उपाधि जित्ने छ वा फेरि पुरानै असफलताको कथा दोहरिने छ । त्यो समयले मात्र भन्न सक्नेछ ।
फेरि एकपल्ट लिभरपुल पुराना दिनका कथाजस्तै उपाधि दाबेदार हो । भान डिज्क भिर्गिलको आगमनले लिभरपुलको डिफेन्स बलियो हुनेछ । म्यानचेस्टर सिटीमा जस्तै योर्गन क्लोपको आगमनयता लिरभपुल अपेक्षाअनुसार जम्न सकेको छैन । साउथह्याम्पटनका भान डिज्कको आगमनले डिफेन्स बलियो हुनेछ । लिरभपुलको यही डिफेन्स क्षेत्र हो, जुन गत सिजन निकै खुला–खुला देखिएको थियो । फिलिप कोटिन्होको भविष्य के हुने हो, त्यो अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । लिभरपुल समर्थकको एउटै प्रार्थना रहेछ, ब्राजिलका यी स्टार खेलाडी एनफिल्डमै रहोस् । अनि उनले साडियो माने, रोबर्टो फिर्मिन्हो र अरु नयाँ खेलाडीका लागि गोलका अवसर सिर्जना गरोस् ।
आर्सनल गत सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन सकेन । यो खराब प्रदर्शन हो । तर यो सिजन यही असफलताले टिमलाई फाइदा पुग्नेछ, विश्वास गरे हुन्छ । आर्सेन वेंगर यसपल्ट ट्रान्सफर बजारमा नराम्रोसँग चुके । तर लियोनबाट धेरै आशा गरिएका फरवार्ड एलेक्जान्डर लसाजेटी आर्सनलमा आएका छन् । आर्सनल पनि कम्तीमा कागजमा उपाधिका लागि राम्रै दाबेदार हो । वेंगरको टिम यसपालि केही तहल्का मच्चाउन सक्छ । यस्तो विश्वास गर्ने धेरै फुटबल पण्डित छन् । ‘गनर्स’ को डिफेन्स कमजोर छ, यसमा सुधार चाहिन्छ । टिममा समर्थकको विश्वास रहनेछ, तर हेर्नुपर्नेछ, क्लबले सिजनको बीचतिर के गर्नेछ ?
सायद यसपल्ट म्यानचेस्टर युनाइटेडले त्यो टिम पस्कँदै छ, जुन जोसे मोउरिन्होको टिम भन्न सकिनेछ । डर के छ भने यो म्यानचेस्टरको इतिहास पढेर अपेक्षा े गर्न सकिने टिम भने हुने छैन् । कीर्तिमान २० पल्टको इङलिस लिग विजेता म्यानचेस्टर यसपालि बलियो रहनेछ । यसले पनि उपाधिका लागि उत्तिकै दरिलो चुनौती पेस गर्नेछ, यसमा सबै विश्वस्तजस्तै छन् । लिगमा गत सिजन राम्रो गर्न नसकेपछि क्लबले लिग कप र युरोपा लिग जितेको तथ्य पनि यहाँनिर बिर्सन हुन्न । कम्तीमा यसपल्ट म्यानचेस्टर शीर्ष चारमा अटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । रोमेलु लुकाकुको आगमनले टिममा उत्साह छाएको छ ।
हिटिङ स्वीमिङ पुल बन्ने ›